Ixesha lexesha le-Guangzhou -I-Guangzhou yeOntime yeLizwe ngoLungiselelo lweeNkxaso kwiLizwe
Guangzhou Ontime International Logistics Co., Ltd. (ekuthiwa yi-GZ Ontime) ebekwe kwiSithili saseBaiyun, eGuangzhou. Singummeli we-DHL, i-UPS, i-TNT, i-FedEx, i-Amazon imigca ekhethekileyo (ngokuthe ngqo ithumela kwi-FBA), ulwandle lokuthuthwa kwempahla, ukuphakamisa umoya, ukuthuthwa kwezitimela kunye nokuthutha. Inkampani yethu ibambelela kwifilosofi yeshishini "yomthengi kuqala, ukwenza phambili" kunye nomgaqo "wokuqala wabathengi" ukubonelela abathengi bethu ngeenkonzo ezisemgangathweni. Wamkelekile ukucela ikowuteshini!
I-GZ ye-Ontime Logistics yinkampani yezobugcisa yamazwe aphesheya enamava ali-10 kwindawo yokuthumela kumazwe aphesheya. Ixesha lokuphuma le-GZ linokubonelela ngale nkonzo ingezantsi: ukungenisa iimpahla kunye nokuthumela kwelinye ilizwe, ukungenisa imithwalo kunye nokuthumela impahla ngaphandle, ukuthunyelwa kwezixhobo ezikhulu, ukubonisa ukuthuthwa, ukugcinwa kwempahla kunye nokususwa kwempahla.
Ukubambelela kwinkonzo yokhuseleko, isantya, ukuchaneka kunye noqoqosho, sibonelela abathengi ngothutho lomoya lwamazwe aphesheya nolwasekhaya, umgaqo ocacileyo (iFEDEX, iDHL, iUPS, i-TNT, i-EMS), ukuthuthwa komhlaba, iinkonzo zokuhambisa ngenqanawa, sinokubonelela ukuthuthwa okukodwa okuya eHong Kong, eMacao naseTaiwan
Inkampani yethu inobudlelwane bexesha elide kunye nabanini beenqanawa ezinje nge-apl msk cscl.
Imithwalo yomoya inezibonelelo zeenqwelo moya ezinkulu kunye neenkonzo zokubonisa. Singayamkela imisebenzi yolwandle neyomoya evela kwihlabathi liphela.
Inkampani ixhomekeke kwi-guangzhou kwaye isekwe kwi-pearl river delta, i-guangdong, i-radiation kwilizwe liphela, kunye namaqabane exesha elide e-beijing, e-shanghai, e-tianjin, e-qinghai, e-dalian nakwezinye izixeko.
Kwangelo xesha, kusekwe uthungelwano lokuhambisa iimpahla ngokugqibeleleyo, olunokuthi lubonelele abathengi ngohlu olupheleleyo lweenkonzo zokungena kwindlu ngendlu kwihlabathi liphela. Singabendawo. Sisehlabathini lonke. Sikho naphi na apho ufuna kwaye kufuneka ubekhona.
Siyazazi iindlela, ukhetho, iirhafu, iifizi kunye nendlela ebalaseleyo yokuthumela iimpahla zakho.
Masikwakhe ngemeko efanelekileyo yokugcina izinto eya kukugcina useshishini ixesha elide. Ukuthunyelwa kwakho kuya kufika ngokukhuselekileyo nangexesha kwaye kuya kukugcinela iindleko zexesha elide.